Zim's ruling Zanu-PF readmits party stalwarts expelled by Mugabe – reports | News24
'We're ready to talk... Chamisa must clear confusion on his head,' says Zim's Zanu-PF
Zimbabwe's ruling Zanu-PF has reportedly readmitted back into the party, former secretary for administration Didymus Mutasa and ex-war veterans leader Jabulani Sibanda, almost four years after they were expelled by former president Robert Mugabe.
According to New Zimbabwe.com, Zanu-PF spokesperson Simon Khaya Moyo confirmed the development.
Mutasa, former vice president Joice Mujuru, former Zanu-PF spokesperson Rugare Gumbo as well other top party officials were expelled from the party on various charges, including plotting to topple Mugabe in 2014, AFP reported.
The trio went on to form the Zimbabwe Peoples First, but things didn't work out for them resulting in a major party infighting that saw Mujuru leaving to form another political party.
Didymus Mutasa and Joice Mujuru (File: AFP)
A Herald report said that Zanu-PF was still processing applications for a number of other expelled members, including Retired Brigadier Ambrose Mutinhiri, Kudzanai Chipanga and Innocent Hamandishe.